Global Aawaj | चित्रकार बडी बिल्डर सुजन चित्रकार बडी बिल्डर सुजन
चित्रकार बडी बिल्डर सुजन
माता मायादेबी पिता सुर्जेका कान्छा सन्तानका रुपमा काठमाडौंको पकनाजोलमा वि.सं. २०४२ सालमा सुजन तामाङको जन्म भएको थियो । सानैदेखि उनी चित्र कोर्न खुब पराउँथे । विद्यालयमा रंगमा खेल्दै उनले कोरेका चित्रहरुको सहपाठी र गुरुहरूका बिच निकै चर्चा हुने गथ्र्यो । क्रमशः बढ्दो उमेरसँगै उनको आकर्षण फुटबल तिर गयो । मिडफिल्डरका रुपमा उनले स्पोर्टस सेन्टर क्लबबाट थुप्रै प्रतियोगिताहरु समेत खेले ।
एसएलसी परीक्षा पास भए लगत्तै फुपाजु वरिष्ठ कलाकार अमिरमान चित्रकारको सल्लाह अनुसार उनी ललितकला क्याम्पसमा अध्ययन गर्न थाले । घरमा बुबा र दुवै दाजुहरु समेत व्यायाम गर्ने गरेकाले उनको पारिवारिक माहोल नै व्यायाममैत्री थियो । प्रसिद्ध हलीउड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन रेम्बोबाट उनी निकै प्रभावित थिए । उनको मिलेको सुगठित शरीरबाट सुजन अभिप्रेरित भई सानैदेखि घरमा नै व्यायाम गर्न गरेको उनी बताउँछन् । वि.सं. २०६३ सालदेखि भने उनले Perfect Gym बालाजुमा जिम जान थाले ।
प्रशिक्षक गुरु मनोज श्रेष्ठको सल्लाह अनुसार उनले जिम शुरुवात गरेको दुई महिनामै नेपाल शारीरिक सुगठन सुगठन संघको आयोजनामा भएको मिष्ट्रर हिमालय शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा सहभागी भए । उनले ५५ केजी तौलसमूहमा भिडे । यो नै उनको पहिलो शारीरिक सुगठन खेलको प्रतिस्पर्धा थियो । जसमा उनी तौल समुहमा उत्कृष्ट पाँचमा पर्न सफल भए । त्यसपछि पुनः २०६४ सालमा नेपाल व्यायाम मन्दिरबाट आयोजना भएको धर्मश्री प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्दा छनौट चरणबाटै बाहिरिए । यो घटनाले उनलाई साह्रै निराश बनायो । नैराश्यतामा प्रतियोगितामा सहभागी नहुने मात्र होइन अब देखि व्यायाम नै नगर्ने निष्कर्षमा निकाले । फस्ट्रेसनका कारण तीन वर्षजति जिममा फर्केनन् ।
उता २०६४ सालमा स्नातक तहको चित्रकाला प्रतियोगितामा आयोजना भयो । उनी सहभागी भएर दोश्रो हुन सफल भए । वि.सं. २०६५ सालमा उनी अन्तर क्याम्पस स्तरीय चित्रकला प्रतियोगितामा भयो । जसमा उनी प्रथम हुँदै वर्षको उत्कृष्ट चित्रकार मात्र घोषित भएनन्, पन्थी स्मृति पुरस्कारबाट नगद १० हजार समेत प्राप्त गर्न सफल भए । ललितकला क्याम्पसबाट घर फर्कने क्रममा एकदिन सववेमा एउटा ठूलो बडि बिल्डरको तस्बिर देखेँ । साइबरमा गएर खोजी गर्दा उनी चर्चित बडि बिल्डर जे कट्लर रहेछन् । उनको बारेमा थप खोजी गर्दा कट्लरको संघर्षको कथाले उनलाई निकै मन छोयो । तामाङले नयाँ उर्जा प्राप्त गरे । पुनः परफेक्ट जिमका सञ्चालक रवीन्द्र कपालीको सल्लाह अनुसार नै २०६० सालमा नेपाल व्यायाम मन्दिरमा सदस्य बने ।
त्यसपछि व्यायाम मन्दिरका अध्यक्ष नारायण प्रधान र प्रशिक्षक सुन्दर पोडेको निगरानीमा व्यायाम गर्न थाले । २०६८ सालमा भएको बाह्रौं धर्मश्री प्रतियोगितामा भाग लिए । त्यसमा पनि वजन समुहमा दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाएँ । सन् २०११ अक्टोबरमा थाइल्याण्डको बैंककमा हुने ४५ औं एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा सुजन २६ वर्षको कलिलो उमेरमै छनौट हुन सफल भए । जुन खेलमा उत्कृष्ट पाँचमा उनी पर्न सफल भए । सन् २०१२ मा चाइनाको ग्वानंझाउमा आयोजित ४६ औं एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट पहिलो एतिहासिक कास्य पदक भित्राउन उनी सफल भए । २०६९ सालमा नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेश संघद्वारा आयोजना गरिएको चौथो मिष्टर हिमालयमा ५५ केजी तौल समूहमा प्रथम भए ।
सोही सालमा नेपाल जिम सिद्धार्थनगरको आयोजनामा भएको अम्बुजा मिष्टर नेपालमा उनी ६० केजी तौल समूहमा स्वर्णपदक प्राप्त गरे । २०७० सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट नेपालगञ्जमा आयोजित चौधौ राष्ट्रिय शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा उनी ६० केजी तौल समूहमा मिष्टर नेपालको उपाधि चुम्न सफल भए । सन् २०१४ मा पाकिस्तानको लाहौरमा सम्पन्न दशौं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरेर ५५ केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न हात पारे । यसपटक नेपालले टिम च्याम्पियनको उपाधि समेत उचाल्न सफल भयो । २०७१ सालमा पोखरामा भएको प्रथम मिस्टर बुल्सम्यानमा उनि ६० केजी तौल सम्ममा स्वर्ण पदक हात पार्न सफल भए ।
वि.सं. २०७३ सालमा भएको छैठौं मिष्टर हिमालय प्रतियोगितामा उनी ६० केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक जित्न सफल भएको उनले बताए । शारीरिक सुगठन खेलसँगै उनको चित्रकला तर्फको रुझान पनि क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ । त्यही साल गत अगस्ट महिनामा अमेरिकाको सिकागोमा पहिलो एकल Watercolor Art Exhibition गर्न सफल भएका छन् । उक्त प्रदर्शनी गर्ने अमेरिकी नागरिक Sir Ernest Schiller ले सुजनलाई धेरै सहयोग गरेका थिए । हाल उनी आर्ट शिक्षकका रुपमा थुप्रै स्कुलहरुमा आबद्ध छन् । उनी New Flex and Fitness ढल्कोमा Personal Trainer को रुपमा समेत कार्यरत छन् ।
जिबनमा अत्यन्त दुःखदायी क्षणकाबारे चर्चा गर्दै उनी संझन्छन् । सन् २०१४ सालतिर राष्ट्रिय शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताको तयारीको क्रममै रहेको बेला अकस्मात् उनको पिताको निधन भयो । सामाजिक संस्कार कर्ममा लागेका बेला उनी अशाध्यै निराश र भावविहाल हुँदै शोकमा हराए । आउदा प्रतियोगिताको तयारी त्याग्ने निष्कर्षमा पुगे तर त्यहिबेला नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेसका अध्यक्ष राजेशबाबु श्रेष्ठ र महासचिव दिनेशराज भण्डारी र नेपाल व्यायाम मन्दिरका अध्यक्ष नारायण प्रधनले उनलाई सम्झाए र प्रतियोगिता खेल्न लगाए । उहाँहरूकै प्रेरणाबाट उनले खेल जीवनमा पुनः फर्किने निर्णय गरे ।
त्यसलगत्तै भएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रतियोगितामा सफल भए । उनी भन्छन्, ‘जीवनको आरोह अवरोहमा खेलाडीहरु कहिले काँही निराश हुने सम्भावना हुन्छ । उसलाई सधैं माया र सद्भाव सम्बन्धित माउ संस्थाका रुपमा संघले गरिरहेको हुन्छ ।’ त्यस्तो सत्कर्मका लागि संघका सम्पूर्ण अग्रजहरू प्रति उनी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छन् । शारीरिक सुगठन खेल मा मात्र नभएर सुजन आफ्नो अर्को रुचि चित्रकलामा समेत सफलता हात पारिरहेका छन् ।